Palitao voaroaka, palitao Puffer, Palitao Hybrid - Senkai
Palitao ski sy palitao ranomandry
Voaroaka sy ambany palitao Parka
Palitao Puffer sy Vest
Palitao mpamaky rivotra
Palitao padding ivelany
Vehivavy tsy mahazaka rano mitafy palitao ivelany 9220306
Famaritana: ny palitao vita pirinty vita amin'ny lamba miaro amin'ny vehivavy dia tsy mahazaka rano ary tsy mahazaka rivotra. Ny fanoherana akorandriaka mafy sy ny zaitra feno kasety dia miaro anao amin'ny famoahana sy ny mahavoky. Ny vehivavy matevina 100% vita amin'ny polyester mitafy palitao ivelany dia mafana foana. Ny hood azo ovaina sy ny cuffs azo ovaina dia afaka manampy amin'ny fitazonana ny rivotra sy hikirakira mora ny toetr'andro ririnina, toy ny orana, ny rahona na ny oram-panala. Ny paosy tanana 2 dia mety amin'ny fiainana andavanandro. Mety tsara amin'ny akanjo isan'andro izy io, toy ny ski, snowboa ...
Akanjo ivelany tantera-drano an'ny Lady 9220314
Famaritana: ny palitao tsy tantera-drano any ivelany an'ny vehivavy dia mafana sy tsy misy rivotra. Ny fanoherana akorandriaka mafy sy ny zaitra feno kasety dia miaro anao amin'ny famoahana sy ny mahavoky. Ny vehivavy matevina 100% vita amin'ny polyester mitafy palitao ivelany dia mafana foana. Ny hood azo ovaina sy ny cuffs azo ovaina dia afaka manampy amin'ny fitazonana ny rivotra sy hikirakira mora ny toetr'andro ririnina, toy ny orana, ny rahona na ny oram-panala. Paosy tanana 2 sy paosy tratra 1 no mety amin'ny fiainana andavanandro. Mety tsara amin'ny akanjo isan'andro izy io, toy ny ski, snowb ...
Akanjo akanjo ba volom-borona volom-behivavy 17930
Ny palitao volon'ondry akanjo ba mahazatra an'ny vehivavy dia vita amin'ny volon'ondry polyester 100% miaraka amin'ny tarehy misy akanjo ba sy nylon 100%, fampiononana tsy misy valiny. Ny fanorenan-java-manja dia mampihena ny be sy manampy amin'ny fanafoanana ny fikolokoloana. Vato na Heather Obsidian, ireo tonon-taolana ireo dia miasa miaraka amina paitra lamaody azonao eritreretina. Manaova akanjo na mijanona ho mahazatra, ity sombin-javatra ity dia tonga lafatra amin'ny toe-javatra sy tontolo iainana. Famaritana ...
Akanjo palitao vita amin'ny lehilahy ny paosy zipper ...
Ity palitao vita amin'ny lehilahy ity no tena ilainao amin'ny ririnina mangatsiaka. Fahaizana mitafy tsara, na dia amin'ny toe-javatra mando aza. Fonosana microfiber mafana sy maivana ary maivana miaraka amin'ny lamba ivelany mandroaka ny rano - mety tsara amin'ny fitafiana isan'andro izy io. Ny palitao mafana misy fehikibo malefaka malefaka amin'ny hood sy cuffs dia mitazona ny rivotra. Ity palitao vita amin'ny lehilahy ity dia noforonina ary noforonina mba hahazoana fampiasa sahaza sy tsara indrindra, ahafahanao manao ny tsara indrindra vitanao rehefa mankafy ny any ivelany be ...
palitao ivelany vehivavy padding 8218394 wa ...
Ny palitao mitaingina ivelany dia mitazona anao ho mafana. Tsy misy rano, rivotra ary valin'ny hafanana ho an'ny palitao ranomandry mba hisorohana ny lena amin'ny orana Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=18879768 '' Endri-javatra: 1. Lamba: lamba akorandriaka: nodiovina amin'ny rano matihanina, lamba firakofana: polyester / volon'ondry 100%. 2.Waterproof & windproof: lamba polyester avo lenta mitazona ny vatanao ho maina sy mafana ...
palitao tantera-drano vehivavy 9220501-2-6
Vehivavy palitao mitafy rivotra tsy mitafo rivotra no mitazona ny rivotra. Ny palitao akorandriaka tsy tantera-drano dia mitazona anao ho maina sy mahazo aina amin'ny orana sy ny oram-panala .Ny hatelin'ny tafio-drivotra azo alaina miaraka amin'ny tadiny sy cuffs azo ovaina dia manampy hafanana .Ny famenoana kalitao avo lenta dia mitazona anao ho mafana kokoa. Ity dia mety indrindra amin'ny hetsika anatiny sy ivelany. Endri-javatra: 1. Lamba: lamba akorandriaka: nodiovina amin'ny rano matihanina, lamba firakofana: polyester / volon'ondry 100%. 2. Tsy tantera-drano: ny palitao ririnina an'ny vehivavy dia vita amin'ny lamba fofonaina tsy mahazaka rano, ary ny zipera rehetra dia ...
Palitao volom-borona faux an'ny vehivavy WARMY
Ny palitao volom-borona mitafy vehivavy dia vita amin'ny volon'ondry tena tsara. Ny palitao volom-borona mitazona hafanana ary mijanòna ho olona matanjaka na dia amin'ny toetr'andro ratsy indrindra amin'ity akanjo lafo vidy ity aza. Izy io dia sariaka amin'ny tontolo iainana sy voajanahary. Ny cuffs vita amin'ny hazavana sy elastika dia afaka misoroka ny rivotra. Ny palitao dia endrika endrika mora hitafy. Izy io dia mahazatra ary hita amin'ny fomba ofisialy amin'ny fitafiana ihany koa, singa iray misy adaptation isan-karazany izy io. Mifanaraka tsara amin'ny kilaoty fohy tianao, legging, pataloha mainty, pataloha jeans denim, sns. Specificatio ...
Palitao ranomandry tsy tantera-drano an'ny vehivavy NL0039KI-F
Ny palitao mitaingina vehivavy dia tsy mahazaka rano ary tsy mahazaka rivotra. Miaro ny rano matihanina, mifono lamba ary lamba mateza manome antoka ny fihazonana hafanana tsara indrindra, miady amin'ny orana na oram-be izy io. Ny hood azo ovaina azo ovaina azo esorina mba hitazomana ny rivotra sy hahazo aina. Fomba fialan-tsasatra miaraka amin'ny fitaovana maina haingana. Mampiseho ny marika eo amin'ny tratra havia ny marika pirinty. Ampiasaina ho an'ny Skiing downhill, Snowboarding, Snowsports ary fanatanjahan-tena an-kalamanjana amin'ny ririnina. Famaritana ...
Nahavita sy nandany ny fanaraha-maso ny orinasa BSCI tamin'ity taona ity izahay. Fantatsika rehetra fa tombony ho an'ny orinasa ny fanamarinana BSCI: 1.Fenoy ny fepetra takian'ny vahiny. 2. Taratasy fanamarinana iray ho an'ny diff ...
Fampiasana lamba cationic
1. Ny lamba cationic dia misy fitrohana rano tena tsara ary ny fahasamihafana amin'ny tanky fandokoana dia kely dia kely, noho izany dia mety indrindra amin'ny akanjo fanatanjahan-tena, natao ho akanjo ba, pataloha, ...
Ny tombontsoa azo avy amin'ny lamba fanodinana
Miaraka amin'ny fanatsarana ny fahalalan'ny olona ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fivoaran'ny teknolojia, niditra an-tsehatra ny lamba fanodinana. Ny orinasanay izao dia mampiasa lamba namboarina t ...
Palitao fanaovana ski, Palitao Ski, Palitao Ski mitaingina, Palitao Ski an'ny ankizy, Palitao Ski 80 ans, Palitao hoditra,